OK Boomer ... - ခေတ်ပေါ်စကားအသုံးအသစ် - MoeMaKa Media
Home / Currents / TheGeek / USA / OK Boomer ... - ခေတ်ပေါ်စကားအသုံးအသစ်
OK Boomer ... - ခေတ်ပေါ်စကားအသုံးအသစ်
Currents, TheGeek, USA
နိုင်ငံတကာသာဂိ။ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉
လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်မှာ အင်တာနက်နဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ပေါက်သွားတဲ့ စကားလုံးကတော့ " OK Boomer!!!" ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချုပ်ကတော့ ​ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲပြီး မျက်မှောက်အရေးကို မျက်စိမှောက်နေတဲ့ လူအိုမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကို သရော်တဲ့ ဗန်းစကားအသုံးဖြစ်ပါတယ်။ Boomer ဆိုတာက Baby Boomer မျိုးဆက်တွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး အိမ်ပြန်လာတဲ့ စစ်သားတွေ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးတွေ တပြွတ်ပြွတ်မွေးကြတဲ့ ခေတ်ကာလက မျိုးဆက်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ baby တွေ boom ဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့။ ၁၉၄၆ ကနေ ၁၉၆၅ အတွင်းမွေးသူတွေဟာ baby boomer တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာလို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောရင်တော့ နေရစ်တော့ ခေတ်ဟောင်းရေပေါ့။ ရာဇဝင်ထဲမှာ နေရစ်ခဲ့ပေါ့။ အဲသည် လူအိုတွေက တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ ရှေ့တန်းရောက်နေတော့ သူတို့တွေ ခေတ်မမီတဲ့ အမြင်တွေ အလုပ်တွေ ပေါ်လစီတွေဟာ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ထိခိုက်နစ်နာစေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ အခု ခေတ်စားနေတဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲနေမှုအရေး climate change တို့ environmental issues ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့ကို ဘေဘီဘွန်မာတွေက နားမလည်ဘူး၊ လက်မခံကြဘူးလေ။ သည်တော့ သူတို့ကို 'အိုကေ ဘွန်မာတွေ - OK Boomer' တွေလို့ အာလုပ်သံပြုပေးလိုက်တဲ့သဘော။ သည်လို သုံးစွဲလိုက်တော့ အဲသည် လူအိုကြီးမျိုးဆက်က အသဲခိုက်မတတ်နာကြသတဲ့။
အိုကေဘွန်မာ ဆိုတဲ့အသုံးဘယ်မှာ စပေါက်သလဲဆိုတော့ အခုဖေ့စ်ဘွတ်ကို ပုခုံးချင်းယှဉ်လာတဲ့ တရုတ်နည်းပညာသုံး Tik Tok ပလက်ဖောင်းကနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေ နှစ်ဆယ်ကျော်တွေက တစ်တော့ကနေ ရုပ်ပြောင်တွေ သရုပ်ဖော်တွေ ရုပ်ရှင်တွေ နဲ့ OK Boomer ဆိုပြီး ၇၀ ကျော်တွေကိုု ဟားတိုက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု နိဝင်ဘာလဆန်းကနေ ပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာတခုကတော့ - 'အီးစီးကရက်ကို တားမြစ်ဖို့ အစိုးရက တလအတွင်း လုပ်နိုင်တယ်၊ လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျတော့ ခုထိမတားနိုင်တော့ဘူးလား အိုကေဘွန်မာ တွေရဲ့' လို့ ရေးကြ ပြောကြတာမျိုးပေါ့။
OK Boomer လို့ သရော်ခံရတာရဲ့ နောက်အကြောင်းတချက်ကတော့ Boomer တွေက သူတို့တွေ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ကို နောက်ပေါက်မျိုးဆက်သစ်တွေ generation X တွေ millennials(၁၉၉၀ နှောင်းပိုင်းနဲ့ ၂၁ရာစုဖွား) က ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ အမြဲပြစ်တင် ပြောဆိုနေကြတာနေ စတင်တယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး၊ သုံးဖြုံးနေတယ်၊ အနစ်နာမခံဘူး၊ တကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်လို့ ပြောကြရေးကြလေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိ တိုုင်းပြည်ပြသနာတွေဟာ boomer တွေကြောင့်မဟုတ်၊ မျိုးဆက်စသစ်တွေ၏ မသိကျိုးကျင်ပြုမှုတွေလို့ ဆိုကြလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါကို ကြားနေရာတာ နားခါးလာတဲ့ မျိုးဆက်သစ်ရဲ့ နည်းပညာသုံးပြီး တုန့်ပြန်လိုက်တာလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
နယူးယောက်တိုင်းသတင်းဆောင်းပါးတခုမှာတေ့ာ ခေတ်ချင်းမတူတဲ့ မျိုးဆက်တွေရဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်း၊ မျိုးဆက်ဟောင်းနဲ့ မျိုးဆက်သစ်တို့ လမ်းခွဲခြင်း၊ အပြုသဘောဆက်ဆံရေးလမ်းဆုံး လို့ သုံးသပ်ပြလိုက်ပါတယ်။ မျိုးဆက်ဟောင်းတွေက ငါတို့မှန်တယ် မင်းတို့မှားတယ်နဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် ချည်းကပ်နေမှုကို သည်မျိုးဆက်က အာခံလိုက်ပြီလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ OK Boomer !!!
ကိုးကားစရာသတင်းတခုကတော့ နိုဝင်ဘာ ၇ နယူးဇီလန်လွှတ်တော်မှာ အသက် ၂၅ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးလွှတ်တော်အမတ်က ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဆိုတင်သွင်းနေစဉ် သက်ကြီးအမတ်တွေက လှောင်ပြောင်အော်ဟစ်နေတာကြောင့် သူမက 'OK Boomer!!!' လို့ တုန့်ပြန်ပြီး စကားကို ဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကို အိုကေဘွန်မာတွေ လို့ သမုတ်လိုက်တာနဲ့ အဲသည်လူကြီးတွေ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ ဖြစ်ပြီး ငြိမ်ကုတ်သွားကြပါသတဲ့။ ဒီသတင်းကလည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ပေါက်သွားပြန်ပါသေးတယ်။
OK Boomer ... - ခေတ်ပေါ်စကားအသုံးအသစ် Reviewed by MoeMaKa on 6:28 AM Rating: 5